Ciidamada Kumaandooska ee Danab oo gaaray magaalada Dhuusamareeb – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Ciidamada Kumaandooska ee Danab oo gaaray magaalada Dhuusamareeb
Isniin, December, 03, 2018(HNN) Ciidamada Kumaandooska ee loo yaqaano Danab oo ah ciidan uu tababaray Mareykanka, kana tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa xalay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Sida wararku sheegayaan ciidamadan ayaa ka yimid dhanka magaalada Gaalkacyo oo ay saldhig ku leeyihiin, waxaana qorshaha ay u tageen Dhuusamareeb ka mid ah howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Saraakiisha ciidamadan ayaa la kulmay Mas’uuliyiinta Maamulka Galmudug, iyagoo kala hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidii howlgalo looga bilaabi lahaa deegaanada Shabaabka kaga sugan yihiin Bariga Galgaduud.
Ciidamada Kumaandooska ee saldhigooda yahay Gaalkacyo ayaa horay uga qeyb qaatan howlgalo laga sameeyay qeybo ka mid ah Mudug, sidoo kale ciidamadan ayaa ah kuwo uu taageerayo Mareykanka oo ka howlgala deegaanada Galmudug maamusho.
Qeybo ka mid ah Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka taliya Al-Shabaab, gaar ahaan degmooyinka Ceeldheer iyo Ceelbuur.
Ciidamada Kumaandooska ee Danab oo gaaray magaalada Dhuusamareeb added by admin on December 3, 2018